PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2016-12-11 - Isifo sezinso siyingozi uma unesenhliziyo
Isifo sezinso siyingozi uma unesenhliziyo
- NGEMUVA kokuthi kudlule emhlabeni uSfiso Ncwane, kwathiwa uxinwe yizinso, baningi abalokhu bebabaze njalo bethi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu abanjwe yizinso bese eshona.
Abanye baze bathi izinso ziqale zikushuke kuqala, azivele zikuzume nje.
Kodwa odokotela bathi kungenzeka lokhu. Into ephathelene nezinso ingakubamba udlule esikhathini esiyihora uma nje kukhona okunye ukugula okubucayi onakho emzimbeni.
UDkt Kantilal Parag ongudokotela wezinso eSt Augustine eThekwini uthe: “Umuntu ophethwe yizinso angashona ngisho emuva kwehora kutholakale ukuthi unazo. Yize kulukhuni ukuthi ngingageqa amagula ngokwenzeke kulo mculi kodwa engikwaziyo wukuthi uma isifo sezinso sihlasela umuntu ovele enesifo senhliziyo, bukhulu ubungozi okungaholela ekutheni uhlelo lokuhlanza kwazo ngomshini okwaziwa nge-dialysis kungaphumeleli.”
UDkt Bongani Nxumalo uthe isifo sezinso siyakwazi ukucasha egazini size sibonakale sesihambe kakhulu okungaba nomthelela omubi esigulini.
Uthe nazo izifo zezinso zihlukene kaningi njengoba kungaveli ukuthi yisiphi esibulele uNcwane, ngeke akwazi ukuchaza ngokuphelele kodwa wathi izinso zixhumene nezitho eziningi emzimbeni okungaholela ekutheni uma zithikamezeka isiguli sigcine sesiphalaza igazi noma silichama.
“Ukwehluleka kwezinso ukwenza umsebenzi wazo ngokujwayelekile kudala ukuthi imithambo ethize ingakwazi ukuhambisa kahle igazi ligcine lingafinyeleli kuzo zonke izinso. Lokhu kunokuxhumana okukhulu nenhliziyo ngoba inhliziyo iyona ehambisa igazi emzimbeni.”
Ngaphandle kwalokhu uthe ukusetshenziswa kwemithi ethile noma ushevu ungadala umonakalo ezinsweni. Lo monakalo ungaze udale isiguli ukuthi sichame igazi noma siliphalaze.
Phambilini uSfiso wake wakuveza ukuthi odokotela bamtshela ukuthi unesifo senhliziyo kodwa ebesesilawulekile.
UDkt Kwazi Ndlovu uthe ukuphalaza igazi kudalwa ama-hormones alawula ukopha angasebenzi, igazi ligcine liphuma yonke indawo bese isiguli siyaliphalaza, wathi ukuchama igazi nakho kungadalwa wukuthi kube namaqanda egciwane elidla inso.